ỌdịnayaVerse: Nchịkọta akwụkwọ na arụmọrụ akpaaka | Martech Zone
Ọtụtụ ụlọ ọrụ ụwa ka na-eji ma na-etinye ọdịnaya ha site na nyiwe Microsoft Office. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịchekwa njikwa njikwa nke dọkụmentị gị yana arụmọrụ arụmọrụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe agaghị ekwe omume na-enweghị ezigbo ngwa ọrụ eji arụ ọrụ yana ebe nchekwa akwụkwọ iji jigide nsụgharị mgbe ị na-arụkọ ọrụ.
Agencieslọ ọrụ ịzụ ahịa - ọkachasị site na usoro ịre ahịa ọdịnaya - mepụta ụda nke ọdịnaya a na ngwa desktọọpụ ọdịnala. Usoro nyocha sistemụ abụghị ụzọ kachasị mfe iji chọta akwụkwọ, ma ọ bụ nkwado ndabere abụghị ụzọ kachasị mma iji chekwaa ha. Ọdịnaya bụ ụzọ dị ọnụ ala, akwụ ụgwọ maka onye ọrụ ọ bụla, iji chekwaa, chọọ, chọta ma debe akwụkwọ anyị - n'agbanyeghị ụdị ha bụ.
Nchịkọta akwụkwọ - email, nyocha, ikpuru-na-dobe, ogbe, weghara, chekwaa, pịa aka nri.
Dezie ọdịnaya - nzaghachi ndụ na akara ngosi: nkọwa, mmezigharị, stampụ omenala, nkwado, ndetu ihe nnabata, isi ihe, ntinye aka na kọmputa, nkọwa.
Chọọ & jikwaa - Ndenye aha na ịchekwa na kọmịhe ntinye akwụkwọ na nchekwa folda, edepụtara maka nyocha ederede zuru oke na weghachite.
Machiini ọdịnaya - Nkesa na akpaghị aka nke ihe omuma ya na ihe ngosi amara banyere oru na GUI nke sitere na oru.
Kekọrịta ọdịnaya - Mgbanwe faịlụ na-esoro na sistemụ - ụdị ọ bụla nke faịlụ ọ bụla dị maka ntụgharị.
Kpochapụ mgbe oge ruru - Njide atumatu maka akpaka iwepụ ma ọ bụ Archiving nke gharazie ịba uru ozi.
Tags: nchekwanjikwa akwụkwọụlọ ọrụntụgharị uchekọmpụtàarụ ọrụ arụmọrụ
Afọ nke Social Small Business